Olana ara-barotra: eo ny Camm afaka mitsara sy manelanelana | NewsMada
Olana ara-barotra: eo ny Camm afaka mitsara sy manelanelana
Nampahalala bebe kokoa ny asany ny Camm (1), omaly tao amin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Fiaraha-miasa amin’ny Procom (2) sy ny Antenimieran’ny varotra momba ny fitsarana ny raharaha ara-barotra.
« Mitsara sy manelanelana momba ny olana ara-barotra ny Camm. Matetika olana eo amin’ny mpamatsy sy ny mpivarotra. Ohatra, tsy afa-po ny mpivarotra, tsy araka ny nifanarahana, na tsy nahazo ny volany ny mpamatsy entana. Izay no idiran’ny Camm, mifameno amin’ny asan’ny fitsarana momba ny varotra”, hoy Ramangaharivony Gérard, sekretera jeneralin’ny Camm. Tsy miova ny saran’ny fitsarana, iray tapitrisa Ariary, tsy mandalo fitsarana ambony na fangatahana fanafoanana didy.
Tsy dia be mpahafantatra ny fisian’io sampam-pitsarana io, ka ireo orinasa lehibe ihany matetika no miantso azy. Nanomboka ny jolay 2018, misy ny fiaraha-miasa amin’ny Procom hanentanana ny orinasa madinika sy salantsalany. Izay fiaraha-miasa izay, nahazoana fanampiana 115 142 237 Ariary avy amin’ny Vondrona eoropeanina (UE) hiasana hatramin’ny mey 2019, hisokafana any amin’ny Antenimieran’ny varotra hafa, ankoatra ny eto Antananarivo : Antsirabe, Toamasina, Antsiranana, Taolagnaro ary Nosy Be.
Avy amin’io tetibola io ny fanatsarana ny asan’ireo teknisianina amin’ny fitantanana sy ny serasera. Efa misy rahateo ny fiaraha-miasa amin’ny Camm any Paris. Ny fametrahana solontena any amin’ireo toerana ireo noho ny fiaraha-miasa amin’ny Antenimieran’ny varotra. Ireny teknisianina ireny no handray ny fitoriana sy mitantana ny fitsarana miaraka amin’ny sekretera jeneralin’ny Camm.
Najoro ny taona 2015 ny Procom ary hifarana amin’ity taona ity. Tetikasa 86 any amin’ny sehatra tsy miankina nahazo fanohanana mitentina 5,6 tapitrisa euros ho an’ny sampan’asa karazany maro, toy ny fanaovan-damba, famokarana angovo, fambolena. Tsy vitsy ireo orinasa madinika tafavoaka noho ny fanohanan’ny Procom azy ireo.